नागरिक लगानी कोषले सेयर लिलामी गर्ने,कहिलेदेखि बिक्री खुला गर्दैछ: हेर्नुहोस् – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:०१ Basanta Khanal	0 Comments	Nagarik lagani kosh
नागरिक लगानी कोषले फागुन २१ गतेदेखि ३ लाख ५४ हजार १५०.०५ कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कोषले नबिकेको हकप्रद सेयर खुला गर्न लागेको हो । कोषले ८२.८४ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहको उक्त सेयर लिलामी गर्न लागेको हो ।
बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद चैत २ गते तोकिएको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ ।
न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । बिक्री प्रबन्धक आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ, टेकु काठमाडौं तथा नागरिक लगानी कोषको कार्यालय, नयाँ वानेश्बर काठमाडौं र यसका विराटनगर र पोखरा शाखाबाट बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ ।
← शिक्षक व्यवस्थापन नै नगरी किनेको बिद्यालयका कम्प्युटर कवाडी बन्दै
‘हामी कायर हो र, राजीनामा दिन ? कुनै पनि हालतमा राजीनामा आउँदैन’ : मन्त्री श्रेष्ठ →
टिएमएसबाट चलखेल गरेको भेटिएपछी आइतबारदेखि AON सुविधा हट्ने ! माफियाहरुको धन्दा सुक्ने भो !
२८ माघ २०७७, बुधबार ०९:१० Basanta Khanal	0
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपियो निस्कासन मिति सार्बजनिक ( कति कित्ता? )